China L-Leucine CAS 61-90-5 maka ndị nrụpụta na Pharma Grade (USP) | Ekele
Aha ngwaahịa ：: L-Leucine
L-Leucine (Abbreviated Leu) bụ otu n’ime amino acid iri na asatọ, yana otu n’ime amino acid asatọ dị mkpa n’ahụ mmadụ. A na-akpọ ya amino acids (BCAA) nwere njikọta na L-Isoleucine na L-Valine ọnụ n'ihi na ha niile nwere ngwongwo methyl n'akụkụ usoro ha.
Dị ka amino acid dị mkpa, enwere ike iji ya dị ka mgbakwunye na-edozi ahụ ma na-ejikarị ya eme achịcha na ngwaahịa. A nwekwara ike iji ya na nkwadebe ngwọta amino acid, na-agbada glucose ọbara. E wezụga nke ahụ, enwere ike iji ya iji kwalite uto ihe ọkụkụ.
Enwere ike iji Leucine mee ihe dị ka mgbakwunye nri, sizinin na isi ụtọ. Enwere ike iji ya iji kwadebe amino acid na ịmịnye amino acid, hypoglycemic agent na onye na-eto eto na-akwalite.
Ọrụ nke Leucine gụnyere ịkwado isoleucine na valine iji rụkwaa akwara, chịkwaa glucose ọbara ma nye ahụ ike. O nwekwara ike imeziwanye mmepụta nke hormone nke na-eto eto, nyere aka ọkụ abụba visceral; abụba a dị n'ime ahụ ma ọ gaghị enwe ike ịdị irè na-eri naanị site na nri na mmega ahụ.
Leucine, isoleucine, na valine bụ alaka amino acid, nke na-enyere aka ịkwalite mgbake ahụ mgbe ọzụzụ gasịrị. Leucine bụ amino acids kachasị dị irè nke nwere ike igbochi mgbu ahụ n'ihi na enwere ike idozi ya ngwa ngwa wee gbanwee glucose. Dinggbakwunye glucose nwere ike igbochi mmebi nke anụ ahụ, n'ihi ya ọ ga-adabara onye na-arụ ọrụ ahụ. Leucine na-emekwa ka ọgwụgwọ nke ọkpụkpụ, anụ ahụ na anụ ahụ mebiri emebi meziwanye, nke mere na ndị dọkịta na-adụkarị ọdụ itinye itinye mgbakwunye leucine mgbe a wachara ya ahụ.
Isi nri kachasị mma maka leucine gụnyere osikapa agba aja aja, agwa, anụ, mkpụrụ, nri soybean, na ọka niile. Ebe ọ bụ na ọ bụ ụdị amino acid dị mkpa, ọ pụtara na ọ nweghị ike mepụtara ya n'aka ụmụ mmadụ n'onwe ya ma enwere ike inweta ya site na nri. Ndị na-emega ahụ ike dị elu ma na-eri obere protein kwesịrị ịtụle ịgbakwunye leucine. Agbanyeghị na ọ nwere ike itinye ụdị ntụkwasị nke nọọrọ onwe ha, ọ kachasị mma ịgbakwunye ya na isoleucine na valine. Ya mere, ụdị ngwakọta agwakọta dị mfe.
White crystalline ntụ ntụ
Mkpokọta efere niile
+ 14.9 ° ~ + 17.3 Celsius
Ogige ndị yiri ya
Nke gara aga: Glycine CAS 56-40-6 maka ọkwa Pharma (USP / EP / BP)
Osote: L-Lysine HCL CAS 657-27-2 maka ọkwa Pharma (USP)
Gralọ ọgwụ Pharm L-Leucine, Nri oriri na-edozi ahụ, L-Threonine Pharm ọkwa, 73-32-5 L-Isoleucine, L-Threonine Nri Nri, L-Valine 72-18-4,